Kubatira COVID-19 izvozvi zvinosungirwa kune vese vashandi veAir Canada
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Kubatira COVID-19 izvozvi zvinosungirwa kune vese vashandi veAir Canada
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • Health News • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kukundikana kubayiwa jekiseni zvizere naGumiguru 30, 2021 kuchave nemhedzisiro kusvika uye kusanganisira zororo risingabhadharwe kana kumiswa, kunze kweavo vanokodzera pekugara.
Air Canada inounza hutsva hutano uye chengetedzo mutemo.
Vese vashandi veAir Canada uye hew hires vanofanirwa kubaiwa jekiseni ku coronavirus.
Pasi pemutemo wekubvumirwa wekudzivirira, kuyedzwa hakuzopiwi seimwe nzira.
Air Canada nhasi yazivisa kuti yaunza mutemo mutsva wehutano pamwe nekuchengetedza kuchengetedza vashandi pamwe nevatengi izvo zvinoita kuti zvibvumirwe kune vese vashandi vendege kuti vanyatsojekerwa COVID-19 uye kuti vataure nezvevhovho yavo kubva muna Gumiguru 30, 2021. Uye zvakare, iyo nhandare iri kugadzirira kuzadza zvizere mamiriro emabasa kune chero munhu anoshandirwa nekambani.
Kubva pakatanga denda Air Canada anga ari mutungamiri mukutora masainzi-based matanho mukupindura COVID-19. Izvi zvasanganisira nendege kuva pakati pevokutanga kuda pre-boarding tembiricha yekuongorora yevatengi, inosungirwa paneboard mask-ekupfeka marongero uye kushandiswa kwekuyedza. Sarudzo yekuda kuti vese vashandi veAir Canada mainline, Air Canada Rouge uye Air Canada Zororo kuti vanyatsobaiwa uye vazivise mamiriro avo ekudzivirira ndeimwe danho rekuona kuchengetedzeka uye kugara zvakanaka kwevashandi vese nevatengi.
pasi mutemo wekumanikidzwa wekudzivirira, kuyedzwa hakuzopihwe seimwe nzira. Ipo Air Canada ichizadzikisa mabasa ayo ekugarisa vashandi avo nezvikonzero zvine musoro, zvakaita semamiriro ekurapa, vasingakwanise kubaiwa jekiseni, kutadza kubayiwa zvakakwana nhomba musi waGumiguru 30, 2021 ichave nemhedzisiro kusvika uye kusanganisira kusabhadharwa zororo kana kumiswa, kunze kweavo vanokodzera pekugara. Mutemo weAir Canada unoenderanawo nechiziviso chazvino neHurumende yeCanada chinoda kuti vashandi mumakambani anotakurwa nemhepo, njanji, uye zvekufambisa zvemumvura vapiwe jekiseni pakupera kwaGumiguru 2021.
Air Canada inoramba yakazvipira mukuenderera mberi kwekuvandudza uye kushandiswa kweatsva matanho ekuchengetedza uye maitiro sezvo iwo ave kuwanikwa anoshanda uye ari nyore kune vatengi. Matanho akadaro akakosha pakutangazve kwakachengeteka kwemaindasitiri ekufambisa nendege ayo, kunze kwekugonesa maCanada kufamba akasununguka, zvakare mutyairi wezviitiko zvehupfumi muCanada.